WARBIXIN: 3 Sababood Oo Ay Kooxda PSG Uga Awood Badantahay Kooxda Real Madrid – Kooxda.com
Home 2018 February Champions League, France, Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: 3 Sababood Oo Ay Kooxda PSG Uga Awood Badantahay Kooxda Real Madrid
WARBIXIN: 3 Sababood Oo Ay Kooxda PSG Uga Awood Badantahay Kooxda Real Madrid
Waxa maalinta Arabacada si weyn loo sugaya kulan xiiso leh oo dhex mari doona kooxaha Real Madrid iyo PSG kulan ka tirsan lugta 1-aad ee wareega 16-ka champions league.
Real Madrid ayaa isku dayi doonta in ay difaacato tartanka champions league oo ay labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay ku guulaystay halk ay kooxda Reer France doonayso in ay markii ugu horaysay rumayso ku guulaysiga tartanka ugu magaca weyn yurun.
Hadaba waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa 3 sababoo oo kooxda PSG ka caawinaysa in ay ka awood badantahay dhigeeda reer Spain.
Kooxda PSG ayaa ku taamaysa weerar waali ah aan wax loogaa jirin champions leageu isaga oo xilli ciyaareedkan wareega Group-yada dhalisay 25 gool waliba kaliya 6 kulan iyaga oo cel-celis ahaan dhaliyay 4.1% gool kulan kasta waana rikoor cusub oo lagu qoray taariikhda champions league, rikoorkan ayaa muujinaya awooda weerar ee kooxda PSG marka loo eego Real Madrid oo kaliya dhaliyay 17 gool oo 9 ka mid ah uu dhaliyay Cristiano Ronaldo halka xiddigaha Neymar,Mbappe iyo Cavani dhaliyeen 16 gool.
Marka laga hadlo dhanka kulamada maxaliga ah Kooxda PSG ayaa dhalisay 76 gool 25-kii kulan ee ilaa hatan la ciyaaray halka kooxda Real Madrid dhalisay 50 gool 22-kii kulan ee ay ilaa haatan ciyaartay.
Kooxda PSG ayaa sidoo kale haysataa kayd aad u fiican marka loo eego Real Madrid oo aan haysan kayd ciyaarta wax ka badali kara waxana ay arintaas noqon kartaa mid muujin karta haatanba kooxda u gudbi doonata wareega xiga.
Waa mid ka mid ah awoodaha kooxda PSG marka loo eego kooxda Real Madrid kooxda PSG ayaa noqon lahayd kooxda ugu daafaca fiican hadii ayna guuldaro kala kulmin kulankii ugu dambeeyay ee wareega Group-yada ee ay kala kulantay kooxda Bayern Munich.
Kooxda PSG ayaa ka mid ah kooxaha yar ee shabaqooda ilaashaday 4 kulan oo xiriir ah wareegii Group-yada ee xilli ciyaareedkan marka loo eego kooxda Real Madrid oo laga dhaliyay 7 gool wareegii Group-yada.
Kooxda PSG ayaa kaliya hal kulan laga dhaliyay goolal marka laga hadlayo kulamada ay ku ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda waxana uu ahaa kulankii Bayern Munch halka Real Madrid laga dhaliyay 4 gool marka ay ku ciyaarayso meel ka baxsan garoonkeeda.
3.Rabitaanka ah in ay ku guulaystaan koobka:
Khibrada Real Madrid ee champions league ayaa ku dhici doonta rabitaanka kooxda PSG ee ah in ay hesho koobka dhagaha weyn taas oo ah u jeedooyinka ugu weyn ee kooxda loo galiyay lacagta malaayiinta ah xagaagii hore.
PSG ayaa doonaysa in ay niyad jabkii xilli ciyaareedkii hore ay kala kulantay Barcelona ka aar gudato kooxda reer Spain ee Real Madrid waana sababha ugu weyn ee sida weyn ugu leexinaya dhanka PSG u bixitaanka wareega xiga halka ay kooxda Real Madrid ku jirto qaab ciyaareed liita iyo waliba niyada xiddigaha oo aan fiicnayn.